PN16 कार्बन स्टील ओवल फ्ल्यांज निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन कारखाना - आईगुओ
घर > उत्पादनहरू > विशेष निकलान > अंडाकार फ्ल्यांज > PN16 कार्बन स्टील ओवल फ्ल्यांज
हामी शीर्ष क्वालिटी PN16 कार्बन स्टील ओवल फ्ल्यांज आपूर्ति गर्दछौं। यस प्रकारको निकारा कार्बन स्टीलको बनेको छ। गुण हाम्रो संस्कृति हो। पूर्ण उत्पादन गुणवत्ता नियन्त्रण सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियामा लगिएको छ; हाम्रा उत्पादनहरूले तपाईंलाई तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूमाथि बढा दिन्छ।
१.पिन १ C कार्बन स्टिल ओभल फ्ल्यान्जको परिचय
यो पीएन १ C कार्बन स्टिल ओभल फ्ल्यान्ज शीर्ष गुणवत्ताको कार्बन स्टील थियो। हामीले धेरै वर्षहरू युरोप र अमेरिकाको बजारलाई ढाक्दै हामी आफैलाई आफ्नो जीवन समर्पण गर्यौं। हामी चीनमा तपाईको दीर्घकालीन साझेदार बन्ने अपेक्षा गरिरहेका छौं।
२.PN16 कार्बन स्टील ओवल फ्ल्यान्जको उत्पाद प्यारामिटर (विशिष्टता)
ASTM A105, P245GH, P250, RST37.2, S355JR, SS400, SF440A, आदि
एएनएसआई, EN1092, DIN, UNI, BS, JIS, Sans, GOST 1280, AS2129
१.प्लेट फ्ल्यांज २. फ्लेट फ्ल्यांज 3.फ्ल्यांजमा स्लिप 4..वेल्डिंग नेक फ्लाएनजे।CNS / VMC Flaएनजे 6. Blind Flaएनजे 7. Thread Flaएनजे 8.Screwed Flaएनजे 9.Lap Joint Flaएनजे. etc.
एन्टी-रस्ट तेल, कालो लाह, पहेंलो लाह, तातो-डुबाएको जस्ती, विद्युतीय गॅल्वनाइज्ड
सिलि। सतह प्रकार
१ / २â € ™ â € ™ - १â०â € ™ â € ™
नक्कली, घण्टी लगाइएको र तातो उपचार
3.Product Feature And Application of the PN16 कार्बन स्टील Oval flaएनजे
The PN16 कार्बन स्टील Oval flaएनजे is widely used in the जल कार्य, शिपबिल्डिंग उद्योग, पेट्रो रसायन र ग्यास उद्योग, उर्जा उद्योग, भल्भ उद्योग, र सामान्य पाइपहरू जोड्ने परियोजनाहरू आदि।
P.उत्पादयोग्यता of the PN16 कार्बन स्टील Oval flaएनजे
5.Deliver,Shipping And Serving of the PN16 कार्बन स्टील Oval flaएनजे
Our packers will be careful to put the PN16 कार्बन स्टील Oval flaएनजे in Plywood pallet or Fumigate Wood Pallet or Case.
Q: के तपाइँसँग हाम्रो आफ्नै डिजाइन वस्तुहरू गर्न रुचि छ?
A: बिल्कुल! हाम्रो ठूलो चासो छ।
प्रश्न: शिपिंग पोर्ट भनेको के हो?
एक: हामी सामान Qingdao पोर्ट जहाज।
A: उत्कृष्ट गुणवत्ता र प्रतिस्पर्धी मूल्यको साथ वास्तविक उत्पादनहरू; विश्वभरिका ग्राहकहरूसँग सहयोग गर्दै र बजारहरूलाई राम्रोसँग चिन्ने; सेवाहरू पछि अत्यधिक सन्तुष्ट हुनेछ। कुनै पनि समस्या र प्रतिक्रियालाई छोटो समयमा जवाफ दिइनेछ।
हट ट्याग: PN16 कार्बन स्टील ओवल फ्ल्यांज, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, स्टकमा, निःशुल्क नमूना, अनुकूलित, चीन, चीनमा निर्मित, छुट, कम मूल्य, मूल्य सूची, TUV, गुणवत्ता